Qiimeynta: 4.9. Tirada ururada: 70
Dalbo xisaab celin warqadaha
Hawlaha maaraynta ee adeegyada dirista, hannaanka xakamaynta iyo xisaabinta ayaa ahmiyad weyn leh, maaddaama lagu fulinayo xiriir la leh shaqaalaha goobta - dirista. Natiijooyinka iyo tayada adeegyada la bixiyay waxay kuxirantahay waxqabadka dirayaasha. Xakamayn la'aanta saxda ah waxay saameyneysaa heerka waxtarka iyo xawaaraha gaarsiinta, taas oo ka muuqata jawaab celinta xun ee macaamiisha. Xakamaynta ka sokow, waxaa lagama maarmaan ah in aan la iloobin xisaabinta shaqada shaqaalaha goobta. Xisaabinta waraaqaha diratoorka waxaa lagu gartaa dayactirka xogta xisaabaadka jadwalka shaqada, saacadaha shaqada, tirada amarada, iwm waxqabadka waraaq kasta. Ficilka ugu dambeeya ee shaqo dirista waa gaarsiinta, yacni wareejinta badeecadaha ama agabyada macmiilka, kaasoo jawaab celintiisu si weyn u saameynayso sumcadda adeegga dirista. Xaaladaha noocaas oo kale ah, waxaa lagugula talinayaa inaad xafiddo diiwaanka macaamiisha, oo aad siisid warqaadayaasha qaab ay ku helaan jawaab celin
Jawaab celin togan iyo tirakoobka macaamiisha ayaa saameyn weyn ku yeelan kara kororka tirada macaamiisha, taas oo si togan u saameyn doonta heerka faa'iidada iyo faa'iidada shirkadda. Haysashada diiwaanada warqaadayaasha way murugsan tahay goobta goobta ay ka socdaan hawlahooda. Xisaabinta macaamiisha waxay sababi kartaa dhibaatooyin badan sababo la xiriira qulqulka badan ee amarrada. Waqtigan xaadirka ah, suuqa tiknoolajiyada cusub iyo barnaamijyada xisaabinta ayaa bixiya dhammaan xalalka suurtagalka ah si loo hagaajiyo howlaha shirkadaha. Nidaamyada otomaatiga ah ee loogu talagalay in lagu hagaajiyo hababka shaqada ayaa suurtogal ka dhigaya in la yareeyo isticmaalka shaqada aadanaha. Xisaabinta otomaatiga ah waxay leedahay faa iidooyin badan, oo ay kujirto kontoroolka joogtada ah ee howlaha xisaabinta, taas oo macnaheedu yahay saxsanaanta dammaanadda iyo suurtogalnimada ugu yar ee khaladaadka. Xisaabinta otomaatiga ah ee waraaqaha waxay kuu oggolaaneysaa inaad si otomaatig ah u socodsiiso dhammaan geeddi-socodka, sameyso degsiimooyin, xisaabiso mushaharka, iwm. Marka laga hadlayo xisaabinta macaamiisha, nidaamku wuxuu si otomaatig ah ugu wareejin karaa amarrada 'xogta keydka xogta, isagoo la socda dhammaan xogta lagama maarmaanka ah. Xogtaan ayaa kadib loo adeegsan karaa adeegyada suuqgeynta si loo xakameeyo loona wanaajiyo tayada adeegyada la bixiyo.
Barnaamijyo xisaabeed kala duwan ayaa kuu oggolaanaya inaad doorato kuwa ugu habboon shirkaddaada, iyadoo la tixgelinayo dhammaan baahiyaha iyo rabitaanka. Waa in la ogaadaa in barnaamijka otomaatigga uu si buuxda u qancinayo dhammaan baahiyaha oo uu leeyahay dhammaan howlaha lagama maarmaanka u ah si loo wanaajiyo howlaha shirkadda. Codsiga USU-Soft waa softiweer otomaatig ah oo hagaajinaya howlaha shaqo ee shirkad kasta, iyadoon loo eegin nooca iyo warshadaha waxqabadka. USU-Soft waxaa si ballaaran looga dhex adeegsadaa shirkadaha gaadiidka iyo adeegyada dirista. Waxyaabaha gaarka u ah barnaamijka xisaabinta waxay kujiraan xaqiiqda ah in horumarinteeda la fulinayo iyadoo la tixgelinayo qaab dhismeedka shirkadda, baahideeda iyo dookheeda. Horumarinta iyo hirgelinta barnaamijka USU waxaa lagu fuliyaa waqti gaaban umana baahnid inaad shaqadaada joojiso umana baahna kharash iyo maalgashi dheeraad ah.
USU-Soft wuxuu hagaajiyaa howlaha sida xisaabinta iyo maaraynta, sidoo kale wuxuu suurtogal ka dhigayaa in la ilaaliyo xakamaynta aan kala go 'lahayn ee howlaha xitaa meel fog. Xisaabinta dirista, barnaamijka USU-Soft wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si otomaatig ah u qabato howlahaas sida dayactirka howlaha xisaabinta iyadoo la raacayo jadwalka shaqada iyo waqtiga warqaadayaasha, maareynta wargeysyada, duubista waqtiga iyo xawaaraha gudbinta ee uu fuliyay qof kasta oo waraaqo ah, iwm Xisaabinta macaamiisha, amar kasta waxaa si otomaatig ah loogu wareejin karaa xog-ururin halkaas oo macluumaadka macaamiil kasta lagu kaydin doono Sidaa darteed, waxaad haysataa dhammaan macluumaadka lagama maarmaanka u ah cilmi-baarista suuq-geynta iyo ka helitaanka jawaab-celinta macaamiisha.
USU-Soft waa maalgashiga ugu fiican mustaqbalka shirkaddaada! Waxay leedahay interface xulashada loogu talagalay oo leh tiro balaadhan oo ah fursado. Waad dejin kartaa xakameynta nashaadaadka shirkadda iyo shaqaalaha, oo ay ku jiraan shaqaalaha goobta ka shaqeeya. Waxay leedahay saacad ku dhisan, sidaa darteed waxaad had iyo jeer ogtahay qadarka waqtiga ku qaatay bixinta. Nidaamka waxaad ku soo bandhigi kartaa casriyeynta shaqada dirista oo aad ku qabataa xisaabinta amarrada, macaamiisha iyo qalabka. Macluumaadka ku saabsan macaamiisha ayaa kaa caawin kara inaad sameyso baaritaan cilmi-baaris ah.
Xisaabinta otomaatiga ah, kormeerka gawaarida iyo la socoshada, xulashada otomaatigga ah ee dariiqa loo dirayo ayaa ah astaamo kooban oo ka mid ah dalabka.
Waxaan kuu soo jeedinaynaa inaad barato awoodaha nooca demo ee bilaashka ah ka hor intaadan dhab ahaantii bixin barnaamijka. Waxaa laga soo degsan karaa degelkeenna. Haddii aad weli su'aalo qabtid, waxaad marwalba weydiisan kartaa wakiilada shirkadeena inay ku tusaan bandhig si aad si cad ugu aragto howlaha nidaamku leeyahay iyo sida ay u fududeeyaan horumarinta ururkaaga. Codsiga USU-Soft wuxuu caan ku yahay isdhexgalka fudud iyo dareenka, taas oo ay ugu mahad celineyso iskudhafka macluumaadka otomaatiga ah inuu noqdo mid aad u fudud oo fudud in wax la barto. Maareynta ayaa noqon doonta mid lagu kalsoonaan karo, waxayna saameyn ku yeelan doontaa shaqsiyaadka adeegyada iyo waaxaha, iyo sidoo kale laamaha, boosteejada, bakhaarada, kuwaas oo ka fog xafiiska dhexe. Xaqiiqdu waxay tahay in softiweerku ku midoobayo dhammaan kaqeybgalayaasha howlaha shirkadda hal shabakad macluumaad ah. Iyada oo gacan laga helayo waxqabadka jadwalka, agaasimuhu wuxuu awood u yeelan karaa inuu ka bilaabo miisaaniyadda isla markaana uu si muuqata u qiimeeyo horumarka mustaqbalka. Loojistikadayaashu waxay awoodi doonaan inay qorsheeyaan waqtiga shaqada iyo jadwalka shaqada. Khabiir kasta oo ka tirsan shirkadda wuxuu u soo jeesan karaa nidaamka si uu si macquul ah ugu qaybiyo waqtigiisa ama shaqadiisa.